Fanadihadian’ny Afrobaromètre : “Mirehareha amin’ny maha Malagasy azy ny 95% amin’ny Malagasy” | NewsMada
Fanadihadian’ny Afrobaromètre : “Mirehareha amin’ny maha Malagasy azy ny 95% amin’ny Malagasy”
Ny maha Malagasy azy no tena fiheveran’ny ankamaroan’ny Malagasy: amin’ireo firenena 34 afrikanina, anisan’ny avo indrindra ny fiheverana eto Madagasikara: mahatratra 95% ny mirehareha amin’ny filazana ny maha Malagasy azy.
Fahefatra amin’ireo firenena mirehareha fa an’ny firenena misy azy ny Malagasy, raha ny fanadihadian’ny Afrobaromètre, taona 2014-15, nosoratan’ny misahana ny fandaharanasan’ny Afrobaromètre ao amin’ny IREEP, Bénin, Richard Houessou, ary ny talen’ny kabinetran’ny Coef-Ressources, solontenan’ny Afrobaromètre eto Madagasikara, Razafindrazaka Désiré. Ao amin’ny Dépêche lah. 62, Afrobaromètre 20 novembre 2015, izany ary nampitainy tamin’ny tranonkalam-pifandraisana ny faran’ny herinandro teo.
Milaza ny 44% amin’ny Malagasy fa tsy mirehareha amin’ny maha “Afrikanina” azy, ary 6% no tsy miombona amin’izany hevitra izany. 64% no mihevitra ho “Afrikanina” any an-tanàn-dehibe, 47% izany any ambanivohitra; 57% amin’ ny oniversitera, 46% amin’ny sekoly ambaratonga voalohany; 52 % amin’ny lehilahy, 48% ny vehivavy, ary mitombo izany fiheverana izany araka ny fiakatry ny taona.
Mavesa-danja kokoa ny maha Malagasy noho ny foko niaviana
Arakaraka ny faritra koa ny fiheveran’ny Malagasy ho “Afrikanina” na tsia. Mahatratra 73% izany any Mahajanga, 55% any Antsiranana, 45% eto Antananarivo, ary 34% any Toamasina. Araka ny fanadihadian’ny Afrobaromètre, taona 2011-2013: firenena 34 no mirehareha antsoina amin’ny firenena misy azy. 89% no manambara fa mirehareha amin’ny fireneny, mahatratra 95% izany amin’ny Malagasy: tsy menatra raha antsoina hoe Malagasy.
Mavesa-danja kokoa ny maha Malagasy noho ny foko niaviana: 49% no tsy mihevitra afa-tsy ny maha Malagasy azy fa tsy ny foko niaviany, ary 23 % no milaza fa Malagasy kokoa noho
ny foko niaviana. 19% no mihevitra ny maha Malagasy azy sy ny foko niaviany, tsy misy
afa-tsy 8% amin’ny Malagasy no misaina kokoa ny foko niaviany noho ny maha Malagasy azy, ary 2% no tsy mihevitra afa-tsy ny foko niaviany.